दुवई गएर पूरै कपडाबि’हिन भएर फोटो खिचा’उने महिलाहरु प क्रा उ ; को हुन् त ती महिलाहरु?(हे’र्नुहोस् भिडियो) – Sadhaiko Khabar
दुवई गएर पूरै कपडाबि’हिन भएर फोटो खिचा’उने महिलाहरु प क्रा उ ; को हुन् त ती महिलाहरु?(हे’र्नुहोस् भिडियो)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र २४, २०७७ समय: १७:४०:५७
संयुक्त अरव इमिरेट्स (युएइ) को राजधानी दुबईमा महिलाहरुको एक समूहले अ’नौठो काम गरेको छ । मुस्लिम देश युएई महिलाका बिषयलाई लिएर क’डा छ । तर त्यहीँ केही महिलाहरुले पूरै क’पडा बि’हिन भएर फोटो खिचा’एका छन् । उनीहरुलाई प्रह’रीले पक्रे’को छ ।
शनिबार अनलाइन पोस्ट गरिएको एउटा भिडियो फुटेजमा यी महिलाको एउटा समूह देखिएको छ जो बालकोनीमा छन् र उनीहरुको तस्बिर खिँचिदैछ । युक्रेनी वाणिज्य दूतावासले बीबीसीसँगको कुराकानीमा ११ युक्रेनी महिलालाई प’क्राउ गरिएको जानकारी दिएको छ । यस्तै रुसी मिडिया अनुसार रुसका एक व्यक्तिलाई पनि प्रह’रीले लगेको थियो ।
दुबईमा सार्वजनिक न ग्न ता को मामि’लामा ६ महिनासम्म जे’ल र ५ हजार दिरहामको जरि’वाना लगाउने प्रावधान छ । यूएईको धेरैजसो का’नून शरीया कानू’नमा आधारित छ र अतितमा पनि मानिसहरुलाई सार्वजनिक स्थानमा प्रे’म अभिव्यक्त गरेको र यस्ता कार्यको सार्वजनिक प्रदर्शन गरेकोमा स’जाय दिइसकिएको छ । यस भिडियोमा देखिएअनुसार लगभग एक दर्जन महिला दुबईको मरिना इलाकामा बालकोनीमा यस्तो फोटोसुट गराइरहेका थिए । युक्रेनी वाणिज्य दूतावासका अनुसार यी महिलासँग थप अनु’सन्धान भै रहेको छ ।
यसअघि रुसी मिडियामा सार्वजनिक भएको रिपोर्ट अनुसार आठ रुसी महिलालाई प’क्राउ गरिएको थियो तर अब यो खबर अस्वीकार गरिएको छ । तर रिया समाचार एजेन्सीले अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै यो कामका प्रबन्ध मिलाउने एक रुसी नागरिकलाई पनि प’क्राउ गरिएको जानकारी दिएको छ ।
दुबईमा प्रह’रीले पहिले नै कुनै पनि यस्ता सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकतालार्य हा’नी पुर्‍याउन सक्ने यस्ता कुनै पनि सामग्री प्रकाशित गर्दा जे ल वा जरि’वाना तिनुपर्ने चेता’वनी दिइसकेको छ । प्रह’रीले आफ्नो बयानमा भनेको छ, ‘यस्तो प्रकारको अस्वी’कार्य व्यवहार अरब समाजको मूल्य र नैतिकलाई दर्साउँदैन ।’
यूएईका नागरिक र सबै पयर्टकमाथि यो नि’यम लागू हुन्छ । यसमा कुनै पनि पर्यटकलाई कत्ति पनि छुट हुनेछैन । अतितमा दुबईमा छुट्टीका बेला पर्यटकलाई प’क्राउ गरिएका केही हाई–प्रोफाइल मामि’ला पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । सन् २०१७ मा एक बेलायती महिलालाई एक व्यक्तिसँग सहमतिले त्यस्तो काम गर्दा समेत एक वर्षको जे’ल पठाइएको थियो । हेर्नु’होस् भिडियो:-